म PST / मर्मत गर्दा "मेमोरी बाहिर" त्रुटिOST फाईल के गर्ने? - DataNumen
उत्पादनहरू प्रयोग गर्दै
कसरी थाहा पाउने कि तपाईंको उत्पादले मेरो दूषित फाइल मर्मत / पुनर्प्राप्ति गर्न सक्छ?
म तपाईंको उत्पादनको साथ मेरो फाइल मर्मत गर्न असफल, किन?
म तपाइँको उत्पादन को एक बग पाउन। के गर्ने?
कसरी जाँच्ने कि यदि मेरो फाईल म आफैले पुनःप्राप्ति योग्य छ?
मेरो फाईल रिकभरी भन्दा पर छ। मेरो अन्तिम उपाय के हो?
म तपाइँको उत्पादन मा एक सुविधा उपलब्ध छैन चाहान्छु। के गर्ने?
"शेयर उल्लंघन" त्रुटि कसरी समाधान गर्ने?
प्रगति पट्टी परिवर्तन हुँदैन (वा बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ) र प्रोग्राम स्थिर हुन्छ। के गर्ने?
के मैले पूर्ण संस्करण स्थापना गर्नु अघि डेमो संस्करण विस्थापित गर्न आवश्यक छ?
कसरी तपाइँको सफ्टवेयर अनइन्स्टल गर्ने?
डेमो संस्करण र पूर्ण संस्करण बीच के भिन्नता छ?
के म पूर्ण संस्करण पाए पछि डेमो संस्करण द्वारा उत्पन्न स्थिर फाइल प्रयोग गर्न सक्छु?
पूर्ण संस्करण पाए पछि मैले के गर्नुपर्छ?
के म तपाईको सफ्टवेयर को बिग्रेको म्याक फाइल मर्मत गर्न प्रयोग गर्न सक्छु?
के पूर्ण संस्करण डेमो संस्करण भन्दा अधिक डाटा रिकभर गर्नेछ?
तपाइँको प्रोग्रामलाई मेरो फाइल मर्मत गर्न कति समय लाग्छ?
कसरी मेरो उत्पादन अपग्रेड गर्ने?
मेरो फाईल पहिले नै भित्र छ।zip वाrar ढाँचा। कसरी संकुचित गर्न र यसलाई फेरि Win संग ईन्क्रिप्ट गर्न सक्नुहुन्छZip वा WinRAR?
के तपाईंको कार्यक्रम मकोसमा काम गर्दछ?
के म पहुँच / / / 95 format ढाँचामा स्थिर डाटाबेस उत्पादन गर्न सक्छु?
DataNumen Outlook Repair/ एक्सचेन्ज पुन: प्राप्ति
म PST / लाई मर्मत गर्दा "मेमोरीबाट बाहिर" त्रुटि पाउँछु।OST फाईल के गर्ने?
म किन PST फाईलमा चाहेको ईमेल वा अन्य वस्तुहरू फेला पार्न सक्दिन?
त्यहाँ स्थिर PST फाईलमा केही अनावश्यक वस्तुहरू छन्। तिनीहरूलाई कसरी हटाउने?
म मेरो ड्राइव ढाँचा गर्छु। मँ अझै पनी मेरो आउटलुक डाटा पुन: प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ?
केहि बरामद सन्देशहरूको शव किन खाली छ?
के बीच भिन्नता छ DataNumen Outlook Repair र DataNumen Outlook Drive Recovery?
के बीच भिन्नता छ DataNumen Outlook Repair र DataNumen Exchange Recovery?
किन केहि डाटा रिकभर हुदैन?
किन रिकभर्ड पासवर्ड मैले सेट गरेको भन्दा फरक छ?
कसरी विभाजन मर्मत गर्ने zip फाईल?
स्प्यान गरिएको मर्मत कसरी गर्ने zip फाईल?
डेमो रिपोर्टमा पुन: प्राप्ति योग्य स्थितिको अर्थ के हो?
किन मर्मत गरिएको डाटाबेसमा धेरै मिति फिल्डहरू १ 1900 ००-०१-०१ मा सेट गरिएको छ?
किन म अझै स्थिर खोल्न सक्दिन DBF फाईल?
म मेरो C: ड्राइवको छवि क्लोन गर्छु। यसलाई कसरी पुनर्स्थापना गर्ने?
कसरी माउन्ट गर्ने छवि द्वारा DataNumen Disk Image
कसरी उत्पादनको पूर्ण संस्करणको अर्डर गर्ने?
म अर्डरमा पठाएपछि के हुन्छ?
म कर छुट छ। मेरो अर्डरमा बिक्री कर कसरी रोक्ने?
तपाईं शैक्षिक छुट छ?
मेरो अर्डर कसरी फिर्ता गर्ने?
के इजाजतपत्र स्थायी हो?
कति उत्पादनहरु म तपाइँको उत्पादन मा स्थापित गर्न सक्नुहुन्छ?
के म एक कम्प्युटरबाट अर्को कम्प्युटरमा लाइसेन्स स्थानान्तरण गर्न सक्छु?
इजाजत पत्र कसरी निस्क्रिय गर्ने?
मलाई तपाईंको ब्लग लेख मध्ये एकको बारेमा प्रश्न / समस्या छ। के गर्ने?
के तपाइँ मेरो वेबसाइट मा एक backlink थप्न सक्नुहुन्छ?
यो त्रुटिको मतलब तपाईको PST /OST फाईल धेरै ठूलो छ र तपाईंको प्रणालीमा मेमोरी स्पेस यसको रिकभर गर्न अपर्याप्त छ। सामान्यतया, यो त्रुटि केही कम-अन्त कम्प्युटरहरूमा देखा पर्दछ, र PST /OST फाईल GB० जीबी भन्दा ठूलो छ।
यहाँ "मेमोरी बाहिर" त्रुटि को लागी केहि समाधानहरु छन्।
राम्रो उत्पादन हार्डवेयर कन्फिगरेसनको साथ अर्को कम्प्युटरमा हाम्रो उत्पादन स्थापना गर्नुहोस् र फेरि प्रयास गर्नुहोस्। कार्यको लागि GB 64 जीबी भन्दा बढी मेमोरी र bit 64बिट आउटलुक स्थापना भएको bit 64 बिट कम्प्युटर प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। Bit 64बिट आउटलुकका लागि तपाई 64 XNUMX बिट प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery जुन तपाइँको प्रणालीमा मेमोरीको पूर्ण उपयोग गर्दछ।
निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको सी: ड्राइभमा त्यहाँ खाली डिस्क खाली ठाउँहरू छन्। विन्डोजले डिस्क खाली ठाउँहरू सी: ड्राइभमा भर्चुअल मेमोरीको रूपमा प्रयोग गर्दछ। यदि त्यहाँ सी: ड्राइभमा पर्याप्त खाली डिस्क खाली ठाउँहरू छैनन् भने, त्यसोभए तपाईंले पनि त्यस्तो समस्या भोग्नुहुनेछ। तपाईको C: ड्राइभमा कम्तिमा १००GB नि: शुल्क डिस्क खाली ठाउँ राख्न सिफारिस गरिन्छ।
वा तपाईं प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ DataNumen File Splitter तपाइँको PST विभाजित गर्न /OST धेरै टुक्राहरूमा फाईल गर्नुहोस्, प्रत्येकको बारेमा १०GB आकारका लागि। त्यसोभए चलाउनुहोस् DataNumen Outlook Repair/DataNumen Exchange Recovery यी PST मर्मत गर्न /OST एक एक गरेर वा ब्याचमा "ब्याच मर्मत" प्रकार्य मार्फत फाइलहरू। यद्यपि यो समाधानको साथ तपाईले PST / विभाजन गर्दा केही डाटा हराउन सक्नुहुन्छ।OST फाइल र केहि ईमेलहरू फाईलको सीमामा छन्, तर तपाईं "स्मृतिको बाहिर" त्रुटि हुनबाट रोक्न सक्नुहुन्छ र एम पुन: प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छost डाटा को।
64bit, DataNumen File Splitter, खाली ठाउँहरू, मेमोरी सकियो, विभाजित
यो लेख साझा गर्नुहोस्:
अझै रोकियो? हामी कसरी मद्दत गर्न सक्छौं?
मई 14, 2021 मा अद्यावधिक गरियो